वडाध्यक्ष र सचिवको मिलोमतोमा सरकारी राजश्व झ्वाम! - नेपाल समय
वडाध्यक्ष र सचिवको मिलोमतोमा सरकारी राजश्व झ्वाम!
जनकपुरधाम- जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको एक वडा अध्यक्ष र वडा सचिवले मिलोमतो गरी सरकारी राजश्व हजम गर्ने गरेको खुलासा भएको छ। वडा नम्बर ११ का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र साह र वडा सचिव गौरी शंकर साह मिलोमतो गरी सरकारी राजश्व झ्वाम्म पार्ने गरेको खुलासा भएको हो।
सेवाग्रहीबाट उपमहानगरपालिकाले तय गरेअनुसार राजश्व बुझेपनि रसिद नदिई दुबैजनाले मिलोमतो गरी रकम कुम्ल्याउने गरेको रहस्य सार्वजनिक भएको हो। उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर रिताकुमारी मिश्रसहितको टोलीले शुक्रबार गरेको आकस्मिक अनुगनमको क्रममा वडा कार्यालयले राजश्व रकम छली गर्दै आइरहेको पाएको छ।
वडा कार्यालयले सेवाग्रहीबाट लिने दस्तुरको रसिद र दर्ता चलानीको तथ्यांक मिलान नभएपछि राजश्व छली हुने गरेको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो समय १५ माघमा कार्यालयले एक सेवाग्रहीबाट घरबाटो प्रमाणित गराउन एक हजार १० रुपैयाँ राजश्व लिएको थियो। तर वडा कार्यालयले सेवाग्रहीसँ राजश्व लिएपनि रसिद भने दिएको थिएन्। सेवाग्रहीको गुनासको आधारमा उपमेयर मिश्र, निमित्त प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप साहसहितको टोली वडा कार्यालयमा अनुगमन गर्न पुगेको थियो। र, अनुगनमको क्रममा अन्य सेवाग्रहीसँग राजश्व बुझेपनि रसिद नदिएको उनीहरुले पाएका छन्।
अनुगमन टोलीले १ सय २४ जना सेवाग्रहीको नाम दर्ता चलानी गरिएपनि २७ वटा राजश्व रसदिमात्र काटेको पाएको छ। वडा सचिवले राजश्वको रसिद काट्ने गरेको र सिफारिसमा वडा अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने भएकाले दुबैजनाको मिलोमतोमा राजश्व रकम हिनामिना गरिएको स्थानीयको आरोप छ। वडा नम्बर ११ मै घर भएका वडा सचिव गौरीशंकरलाई राजपाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष रामचन्द्रले उपमहानगरपालिकामा दबाब दिएर आफ्नो वडा कार्यालयमा तानेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रशासकीय अधिकृत प्रदीपले गरेको सोधपुछको क्रममा वडा कार्यालयका सचिव गौरीशंकरले त्रुटी भएको स्वीकार गरेका छन्। सम्पूर्ण काजगपत्र झिकाइ छानबिनपछि आवश्यक कारबाही अगाडी बढाइने उनले बताए।
यता वडा अध्यक्ष रामचन्द्रले भने राजश्व हिनामिनासम्बन्धी कार्यमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन्। आफूले सचिवमाथि विश्वास गरेर सिफारिसमा हस्ताक्षर गरेको उनको भनाइ छ। हतारमा रहेकोले राजश्वसम्बन्धी जानकारी नै लिई सिफारिसमा आफूहले सही गरेको सोधपुछको क्रममा वडा अध्यक्ष रामचन्द्रले बताएका थिए।
उपमेयर मिश्रले वडा सचिवलाई सोमबारसम्म सम्पूर्ण कागजपत्र लिएर उपस्थित हुन निर्देशन दिएको जानकारी दिएकी छिन्।
यसैबीच वडाका निर्वाचित सदस्यहरुले घटनाको छानबिन गर्न माग गरेका छन्। राजश्व रकम हिनामिना गर्नेलाई उपमहानगरपालिकाले कारबाही नगरे अख्तियारमा उजुरी दिने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्।